Nyi Mu Yar: 2008
ပီအက်စ်ပီ ဖန်းဝဲလ်ကို အဆင့်မြင့်တင်ခြင်း PSP CFW u...
CFW 5.0 M33 -3
at Saturday, December 27, 2008 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar0comments
ခရစ္စမတ်နေ့က ဘွန်လေး ကို မထင်မှတ်ဘဲ ရောက်တယ်။ အဲဒီရောက်မှ ဂျူရောင်းပွိုင့် ရှော့ပင်းမော အပိုင်း၂ အဖြစ်တိုးချဲ့ထားတာ ဖွင့်သွားပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ ့ကမှ ဖွင့်တာဆိုပဲ။ အခုဆိုရင် Extension2(JP2) ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါ စတုရန်းပေ ၇၅၀၀၀၀ (ဘောလုံးကွင်း ၁၀ ခုစာ၊ ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၄၅၀) ကျယ်ဝန်းပါတယ်တဲ့။
ဟုတ်ပါ့ တကယ်လည်း ကြီးပါပေတယ်၊ နေ့လည် ၂ နာရီထဲက လျှောက်ကြည့်လိုက်တာ ည ၇ နာရီခွဲ တာတောင် ကြည့်လို့ပတ်လို့မပြီးတတ်သေးဘူး။ NTUC Fairprice ကလည်း Xtra ဆိုပြီး ၂၄ နာရီ ဖွင့်တယ်တဲ့ တတိယထပ်မှာပေါ့။ တော်တော်ကြီးပြီး ဖွင့်ကာစဆိုတော့ သစ်လွင် တောက်ပြောင်နေတာပါပဲ။
အလင်းရောင် သုံးထပ်လုံး အလင်းရောင် Energy Saving ရအောင် တော့ ဆောက်ထားတယ်။ လူတွေဟာလည်း ရှုပ်ထွေးနေတာပါပဲ။ ရောက်ဖူးသမျှ ထဲမှာ အကြီးဆုံး မောကြီးလိုလိုတောင် ခံစားရတယ်။ အောက်ဆုံးထပ်မှာ စားသောက်ဆိုင်တွေ အများဆုံးပေါ့။ အလယ်က အလင်းရောင်ရတဲ့ နေရာမှာ ခုံတွေခင်းထားတာ ကျန်တဲ့ အထပ်တွေကနေ ကြည့်လို ့မြင်ရတယ်။
ဒီလောက်ကြီးတဲ့ နေရာမှာတောင် လူတွေ သိပ်ရှုပ်တာပဲ၊ စလုံးက လူတွေလည်း သွားစရာ နေရာ မပေါလို့ဖြစ်ရမယ်။ ခရစ္စမတ် သစ်ပင် ခပ်သေးသေးလေး တပင်ထားပေးတာ ရိုက်လိုက်ကြတဲ့ ဓာတ်ပုံ ကိုယ်တွေတောင် ပါသေးတယ်။
ဗီဗို စီးတီး တို့ဆန်းတက် စီးတီး တို ့လို မြို့လယ်ခေါင်မဟုတ်တဲ့ မြို့စွန်မှာ ရှိတဲ့ Mall တွေထဲမှာ တော့ အကြီးဆုံးဆိုပဲ။ အဲ့ဒီက Fairprice Xtra ကလည်း အကြီးဆုံး ဖြစ်လာမယ်တဲ့၊ တိုင်းကြည့်လို ့မှ မရတာ သူတို ့ပြောသမျှ ရေးသမျှ ဖတ်ရတာပေါ့။
ဟုတ်၏ မဟုတ်၏ အသာထား၊ နောင်ဆို အာမိုကို Fairprice Xtra ဘက် သွားစရာမလိုတော့လို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ဖွင့်ကာစဆိုတော့ ဘယ်လောက်ဖိုးဝယ်ရင် ရမယ်ဆိုတဲ့ ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်တွေလည်း အချို့ဆိုင်တွေက ပေးနေသေးတယ်။ ရှော့ပင်းမော ကြီး သစ်လွင် တောက်ပနေတုန်း သွားလိုက်ကြဦးဗျာ။
at Friday, December 26, 2008 Labels: MM , Recipes Posted by nyimuyar0comments
ကိုအန်ဒီရဲ့ ဝီရှီမီ ကနေ အမဲသားကြော်နည်း ကို ဖတ်ကြတော့ သက်ထားက ပြောတယ်၊ ယောက်ျား ဒီမှာ အမဲသားကြော်နည်းတွေ စားချင်လာပြီ ချက်ကြရအောင် တဲ့။
ဒါနဲ့ လင်မယား ၂ ယောက် ဝင်းသူဇာ ပြေးပြီး အမဲသား ကီလိုဝက် ၂ ထုပ်(၁ ကီလို) ဝယ်ကြတယ်။ ပြန်လာပြီး အမဲသားတွေ အအေးခံ ထားလိုက်တယ်။ အဲဒီတုန်းမှာ ကြက်သွန် ၃ ဥ လောက်နွာပြီး ခပ်ကြီးကြီးလေး စိပ်ထားတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ ကိုလည်း ၆ မွှာ လောက် နွာပြီး ဓားနဲ့ ဖိထားလိုက်တယ်။
အမဲသားတွေ အသင့်ဖြစ်တော့ အတူနေညီငယ် တယောက် အကြံပေးတဲ့ အတိုင်း ဒိန်ချဉ်ကို သတိရသွားတယ်။ စာရေးသူတို့ဇနီးမောင်နှံ မှာ ချစ်သူက အမဲသားကြိုက်တယ် ဆိုတော့ မကြာခဏ ချက်ဖြစ်တယ်လေ။ အမဲသားချက်တဲ့ အခါတိုင်း အဲဒီ ညီငယ်က အကို ဒိန်ချဉ်ထဲ့ချက်တာ ပိုကောင်းတယ် ချက်ကြည့်ပါလားလို့ပြောလေ့ ရှိတယ်။
ချက်တိုင်းလည်း ဒိန်ချဉ်မရှိတာနဲ့ မထည့်ဖြစ်ဘူး။ ဒီတခေါက် ဒိန်ချဉ် ဝယ်ထားမိတော့ ဒိန်ချဉ် လက်ဖက်ရည်ဖျော် ဇွန်းနဲ့ သုံးဇွန်း ထည့်နယ်ဖြစ်တယ်။ ဆား သင့်ရုံ ထည့်ပြီး ကုလားလေး မဆလာ ပါထည့်နယ်ထားပြီး နာရီဝက် မရှိတရှိလောက် နှပ်ထားလိုက်တယ်။
အားလုံး အဆင့်သင့် ဖြစ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ရန်ကုန်က သယ်လာတဲ့ ပရက်ရှာကွတ်ကာ ထဲကို ဆီထည့် ၊ ဆီပူတော့ အရောင်တင် ငရုတ်သီးမှုန့်ထည့် မွှေးလာပြီ ဆိုတော့ မှ ကြက်သွန်ဖြူ၊နီ ထည့် ခဏလေးကြာတာနဲ့ အမဲသားတွေ ထည့်ပြီး မွှေတာပေါ့။ ခရမ်းချဉ်သီး ၂ လုံးလောက် အနှစ်အရသာ ကောင်းပြီး အရောင်လှဖို့စိပ် ထည့်သေးတယ်။ အသားတွေ အရောင်နဲနဲ ပြောင်းလာတဲ့ အထိ လုံးပြီးမှ ရေမြုပ်ရုံထည့် ပြီး ပရက်ရှာကွတ်ကာ နဲ့ ချက်လိုက်ရုံပါပဲ။
အဖုံးပိတ်ပြီး နာရီဝက်လောက် ရှူးရှူး နဲ့ အသံတွေ မြည်တာ သည်းခံပြီးရင် နူးနေတဲ့ အမဲသားဟင်းရနေပါပြီ။ ပရက်ရှာကွတ်ကာ မရှိခင်က တနာရီမရှိတရှိလောက် ချက်ရတယ်။ ခုတော့ အချိန်ကုန် ပိုသက်သာပြီး ပိုနူးတာပေါ့။
မီးဖိုကို မီးပိတ်ပြီး လေတွေထုတ်၊ အဖုံးဖွင့်ပြီးတာနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း စားနိုင်သလောက် လှီးထည့်။ မီးအေးအေး နဲ့ ရေခန်းအောင် နဲနဲ ထပ်ဖွင့်ထားလိုက်တယ်။ ဆီပြန်စပြုနေပြီဆို မဆလာအုပ်ပြီး အဖုံးလေး အသာပိတ် မီးလည်း ပိတ်လိုက်ရုံပါပဲ။
မွှေးကြိုင် နူးအိနေတဲ့ အမဲနှပ်ဆီပြန်ဟင်း တခွက် မြိန်ယှက်စွာ စားသုံးရုံပါပဲ။ ဒီတခေါက် ဒိန်ချဉ်ရဲ ့အစွမ်းကို တွေ ့တာပါပဲ။ အမဲနှပ် က ခါတိုင်းထက် နူးညံ့ပြီး ပိုအိတယ်။ ပျော့အိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အမဲသားရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် ဖြစ်တဲ့ အမျှင်အမျှင် လေးတွေကို သွားနဲ့ ဆွဲတာမှာ ပျော့ပျောင်း နူးညံ့တဲ့ ဖီလင်ရတာပါပဲ။
ဒိန်ချဉ်အစွမ်းနဲ့ ပိုကောင်းနေတဲ့ အမဲသားနှပ် ဟင်းကို စားလိုက်ကြတာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို ့မေ့သွားတယ်ဗျာ။ ဒိန်ချဉ်ကြောင့် နဲနဲပိုဆိမ့်သလို ခံစားရတဲ့ အမဲနှပ်ဟင်းဟာ မဆလာနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းကြောင့် မွှေးကြိုင် သင်းပျံ့ပြီး စပ်တပ်တပ်လေးနဲ့ ထမင်းကို ပိုစားစေ ပါတော့တယ်။
at Tuesday, December 23, 2008 Labels: Firmware , MM Posted by nyimuyar0comments
ဒါနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ရင် ပြန်ရမလဲ ဆိုပြီး အင်တာနက်တွေပေါ် လိုက်ရှာရင်းနဲ့ အချိန် တပါတ်လောက် ကုန်သွားပါ တော့တယ်။ ပျောက်သောသူ တောင်မှ ရှာရင်တွေ ့နိုင်သေးတာပဲ ဆိုပြီး ဇွဲကြီးကြီးနဲ့ ရှာတာ နောက်ဆုံး တွေ့သွားပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စ တောင်မှ အဲ့သလို ရှာချင်မှ ရှာမိမယ်၊ အခုဟာက မရရင် မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ ရှာရတာပေါ့။ ပထမ သုံးလေးရက် က ဘယ်လိုမှ အစရှာမရဘူး။
အဲ့ဒီကျမှ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ဖုန်းအကြောင်း တော်တော် စုံစုံလင်လင် သိသွားပါတယ်။ နိုကီယာက ကနဦးမှာ DCT-3 နဲ့ DCT-4 ဆိုတဲ့ စနစ်တွေနဲ့ ဖုန်းကို လော့ခ် လုပ်ထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လူတွေက အန်လော့ခ် လုပ်လာကြတော့ Base Band5(BB5) ဆိုတဲ့ စနစ်အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပြီး နောက်ပိုင်း နိုကီယာတွေမှာ သုံးပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ ၆၂၈၈ ကလည်း BB5 စနစ်သုံး ဖုန်းပါ။ BB5 ဆိုတာ ဘာလဲ သိချင်သူများ ဒီနေရာ နဲ့ ဒီနေရာ တွေမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ နိုကီယာ ၆၂၈၈ မော်ဒယ် ဟာ Symbian စနစ်သုံး Series 40 3rd Edition (initial release) ဖုန်းတလုံး ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ဂွတ်ဂယ် ကျေးဇူးနဲ့ ဆိုဒ်တခု သွားတွေ့တယ် ဘလူး-နိုကီယာ တဲ့။ အဲ့ဒီ ဆိုဒ် မှာ နိုကီယာ ဖုန်းတွေ အကုန်လုံး နီးပါရဲ့Firmware (Flash Files) တွေကို စုဆောင်းပေးထားပါတယ်။ သူ ့စနစ်နဲ့ သူ စနစ်တကျ ခွဲပေးထားတာပေါ့။ ဖုန်းကို ပြင်တဲ့ သူတွေတော့ အလွန်သုံးဝင်မယ့် ဆိုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာလိုသူများ Blue-Nokia ကို ဒီနေရာ ကနေ သွားနိုင်ပါတယ်၊ ၆၂၈၈ ရဲ့ ဖန်းဝဲလ် ကို ရှာလိုက်တော့ နိုကီယာ က ထုတ်ထားတဲ့ ၆.၁ ဗားရှင်းအပြင်။ ပြင်ပက ဆော့ဝဲလ် သမားတွေ ရေးထားတဲ့ ၆.၄၃ ဗားရှင်းအထိ ရှိနေတာ တွေ ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ သိတဲ့အတိုင်း နောက်ဆုံး အငြိမ်ဆုံးလို့သေချာတဲ့ ၆.၄၃ ကိုပဲ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲချလိုက်ပါတယ်။
ဖန်းဝဲလ် ၆.၄၃ ကို ဆွဲချပြီး အင်စတော လုပ်ကြည့်တော့ ဖိုင်တွေကို သာ ကွန်ပျူတာထဲ ကော်ပီကူး ထည့်ပေးသွားတယ် ဘာမှ မလုပ်ပေးသွားပါဘူး။ စာရေးသူ အဖြစ်က ဒီဗီဒီပြားရပြီး အောက်စက်မရှိလို့ ရုပ်ရှင် မကြည့်ရတာနဲ့ တူနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကြားခံ ဆော့ဝဲလ် တခုခု လိုဦးမှာပဲ ဆိုပြီး ဂွတ်ဂယ်ကြီး အားကိုး ရပြန်ပါတယ်။
နောက်ထပ် သုံး လေးရက်လောက် နေမှ ဖိုရမ်တခုကို တွေ့ပါတယ်။ Gsm Hosting တဲ့၊ အဲ့ဒီ ဖိုရမ်မှာ ဘာသွားတွေ့လည်း ဆိုတော့ နိုကီယာ တွေ ဖုန်းသာ Physical အစိတ်အပိုင်း မပျက်စေနဲ့ ဆော့ဝဲလ် ပိုင်း ဖန်းဝဲလ်ပိုင်း သာ ပြစ်ချက် ဖြစ်ပါစေ ပြန်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ တော့ပစ် တခု သွားတွေ ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲက ညွန်းထားတဲ့ အဆင့် ၅ ခု အတိုင်း လိုက်လုပ်လိုက်တာ နောက်ဆုံးမှာ စာရေးသူရဲ့ နိုကီယာ ၆၂၈၈ ဖုန်း ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဖုန်းက လုံး၀ ပါဝါဖွင့် လို ့မရတော့ တောင်မှ ပြန်ကောင်းပါတယ်။ ဘယ် နိုကီယာ BB5 စနစ်သုံး မဆို လုပ်လို့ရပါတယ်။
တပါတ်လောက် စိတ်အညစ်ခံပြီး နောက်ဆုံး ပြန်ရသွားတော့ လင်မယား ၂ ယောက်လုံး ပျော်လိုက်တာလေ၊ ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ။ သူကလည်း အကောင်းကနေ သုံးမရဖြစ်တဲ့ ဖုန်း ပြန်ကောင်းတော့ ပျော်။ စာရေးသူကလည်း လျှောက်ကလိတာ ပြန်အဆင်ပြေလို ့ပျော် နဲ့ တပါတ်လောက် စိတ်ညစ် စိတ်ပင်ပန်းခဲ့တာတွေ တောင် ပျောက်ကုန်ပါတယ်။ သူက ပြန်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်း ရှာဖွေတွေ ့ရှိသွားတဲ့ စာရေးသူကိုလည်း ပြုံးကြည့်လို ့။ သူ ့အပြုံးကြောင့် လောကကြီးကို ခဏလောက်တောင် မေ့လို ့သွားပါတယ်။
အောက်ပါ အင်တာနက် စာမျက်နှာများကြောင့် ဖုန်းကို ပြန်ကောင်းစေတာပါ။
Download Phoenix_2008_34V1 software
Find and Download BB5 Flashes File
Instruction By Jawad
2-Download and install needed flash file from here (note:install only needed flash file,not more than one)
4-Go Flashing--Firmware update,new window popup,Press [...] button and select desired product code (If you install more than one flash file,products will be mixed for you now)
5-check DEAD PHONE USB FLASHING and press Refurbish,soft will ask you to powerON the phone do it and enjoy FREE FAST EASY BB5 FLASHING.
Credited to jawad8305 @ forums.gsmhosting.com
at Monday, December 22, 2008 Labels: Australia , MM , Travel Posted by nyimuyar2comments
at Monday, December 22, 2008 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar 1 comments
အေစီစီအေ ကျောင်းစလျှောက်ဖို့အရေးအကြီးဆုံးတခုက ကျောင်းတက်မယ့် သူကို အစစအရာရာ တာဝန်ယူမယ့် (စပွန်ဆာ) အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် ရှိသူ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံသားပါပဲ။ ဒါလည်းပဲ အိုင်စီအေ က တောင်းတာပါ။ မြန်မာတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း နိုင်ငံသား မိတ်ဆွေ ထက် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း ပီအာ တွေကို အကူအညီတောင်းကြတာပါပဲ။
ပီအာ နိုင်ငံသား မိတ်ဆွေတွေ မရှိလို့ထူးပြီး အားငယ်မသွားပါနဲ့၊ ကျောင်းတွေက အထူးအစီအစဉ် အနေနဲ့ စပွန်ဆာ အော်ဖာ ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ စပွန်ဆာ အတွက် ကျောင်းတွေက စလုံးငွေ ၅၀၀ တောင်းပါတယ်။ စလုံးငွေ ၅၀၀ (ကျပ်ငွေ ၄သိန်းခွဲ ငါးသိန်း) ဟာ ကိုယ့်အတွက် အရမ်းကြီး အခက်အခဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်၊ မိတ်ဆွေတွေကို အကူအညီ တောင်းမနေပါနဲ့ ကျောင်းကပဲ အဲ့ဒီ စပွန်ဆာကို ယူလိုက်ပါ။
ငွေ လေး၊ငါးသိန်း သက်သာလည်း မနည်းပါဘူးဆိုပြီး အလွန်မရင်းနှီးတဲ့ သူတွေကို ပီအာ စပွန်ဆာ တောင်းပြီးမှ မိတ်ပျက်ရတဲ့ သူတွေ မနည်းပါဘူး။ ကျောင်းအပ်ဖို့စပွန်ဆာ ဟာ သိပ်ဇယားရှုပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ စပွန်ဆာ ပေးတဲ့ လူကို ၄ခါ ၊၅ခါလောက် ဒုတ်ခပေးရလို ့ပါပဲ။ တကယ် အပြုံး မပျက် အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး ပီအာ စပွန်ဆာ ပေးတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလူရဲ့ ကူညီမှုကို အထူးအသိအမှတ်ပြုပြီး ကျေးဇူးတင်ပါလို့ရေးချင်ပါတယ်။ တကယ့်ကို အားနာစရာ ကောင်းပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို ့လည်းဆိုတော့ အိုင်စီအေက ထောက်ခံပေးတဲ့ သူရဲ့စီပီအက်ဖ်တွေ၊ ပီအာ ရာဇဝင် ကောင်းရဲ့လားတွေ၊ နောက် အခြားလိုအပ်ချက်တွေကို အွန်လိုင်းကနေ အီးမေးလ်ပို ့တောင်းတာပါ။ ဒါကို သူက မအားလို့ဝင်မကြည့်နိုင်ရင် စတူးဒန့်ပါစ် နောက်ကျပါတယ်။ အချက်အလက် မမှန်ကန်ရင် ပယ်ချနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမျိုး ၂ ကြိမ်ထက်မနည်း လုပ်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး စတူးဒန့်ပါစ့် ကျပါပြီဆိုတဲ့ စာတောင် အဲ့ဒီ ထောက်ခံပေးသူရဲ့လိပ်စာ ဆီကို စာတိုက်ကနေ ပို ့လိုက်တာပါ။ ကျောင်းသား စလုံးရောက်လို့ အိုင်စီအေ မှာ စတူးဒန့်ပါစ့် သွားထုတ်အခါကျရင် ပီအာ၊နိုင်ငံသားရဲ့ အိုင်စီ မူရင်း ပြရတဲ့အထိပါပဲဲ။ ကျောင်းကနေ တာဝန်ယူပြီး လျှောက်ပေးရင် အဲ့ဒါတွေ လုံး၀ ဇယားငြိမ်းပါတယ်။ စလုံး ၅၀၀ နဲ့ စိတ်ချမ်းသာရတယ်၊ ကိုယ် အိုင်စီအေ ကို တင်ထားတဲ့ အခြေအနေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် သိရတယ်၊ ကျောင်းကပဲ အလုံးစုံ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးတော့တာပါပဲ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားတွေ ဆိုရင် မမေ့ရမှာက ကိုယ်တက်မယ့် ဘာသာရပ် သုံးခုလုံး အတွက် သင်တန်းကြေး ရယ်၊ အနီးကပ် အထူး (ပြန်လှန်လေ့ကျင့်မယ့်) သင်တန်းကြေးရယ် တပေါင်းတည်း သွင်းရမယ် ဆိုတာပါပဲ။
နောက်တခု သိဖို့ရာက အေစီစီအေ စာမေးပွဲတွေ စင်ကာပူမှာ ကျင်းပနိုင်ဖို ့ရာအတွက်၊ အေစီစီအေ နဲ့ စင်ကာပူက စာရင်းကိုင် အဖွဲ့အစည်း (အိုင်စီပီအေအက်စ်) နဲ့ သဘောတူညီမှုကြောင့် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အေစီစီအေ မှာ အသင်းဝင် ရသလို စင်ကာပူက အဲ့ဒီ စာရင်းကိုင် အဖွဲ့ မှာပါ အသင်းဝင်ရပါတယ်။ အဲ ဒါနဲ့ပဲ နှစ်စဉ်ကြေးကို လည်း အေစီစီအေ ကို သွင်းရလို အိုင်စီပီအေအက်စ် ကိုလည်း နှစ်စဉ်ကြေးသွင်းရပါတယ်။ နှစ်တိုင်းသွင်းရမှာ ဖြစ်သလို ဘယ်တခုကိုမှ ပျက်ကွက်လို ့မရတာကို သဘောပေါက်ထား ရပါမယ်။
ကက်ပလန်က ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ သင်တန်းအချို ့နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ကျောင်းအပ် လက်ခံပါတယ်။ ကက်ပလန် အသိအမှတ်ပြု ကျောင်းအချို ့ပေါ့။ အေးဂျင့်တွေလို လုပ်ပေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတာတခုက အဲ့သလို ကျောင်းတွေက စုပြီး ကျောင်းအပ်ကြတဲ့ အခါ စစချင်း ကနဦးကျောင်းဝင်ကြေးငွေွ စလုံး ၄၀၀ ကျော်လောက်ပဲ ပေးထားရတာပါ။ စတူးဒန့်ပါစ့် ကျလို့ကျောင်းသား စင်ကာပူကို ရောက်လာပြီ ဆိုတော့မှာ ကျန်တဲ့ ငွေပမာဏ အလုံးအရင်းကို ပေးရုံပါပဲ။ ကျောင်းဝင်ကြေးငွေ စလုံး ၄၀၀ ကျော်လောက်ကတော့ ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ပြန်မအမ်းတဲ့ငွေပါ။
အဲ့သလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စင်ကာပူနေ တဦးဦးက အပ်ပေးလို ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် ကျောင်းအပ်လိုက်တာနဲ့ ငွေတလုံးတခဲတည်း (စလုံးငွေ ၃၅၀၀ စွန်းစွန်းလောက်) ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံအကြောင်းမလှ လို့စတူးဒန့်ပါ့စ် ရီဂျက်ဖြစ်တယ် ဆိုရင် ကျောင်းကနေ ကျောင်းဝင်ကြေးငွေ ကို နှုတ်ပြီး ပြန်ပေးရမယ့်ငွေ ကို ပြန်ပေးမှာပေါ့။
ဒါကြောင့် ကိုယ်က သေချာမှ ငွေပေးချင်တယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်က စင်ကာပူအသိအမှတ်ပြု သင်တန်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ နောက်တခုက အဲ့လို သင်တန်းတွေက လုပ်ပေးတဲ့အခါ လူများစုနဲ့ လုပ်ရပြီး သတင်းအချက်အလက် ပိုစုံတာပေါ့။ စင်ကာပူလာတဲ့ အခါ အဲ့လို သင်တန်းတွေက သူငယ်ချင်းတွေ တစုတစည်းထဲ လာကြတဲ့အတွက် မိန်းကလေးတွေ အဖို့လုံခြုံစိတ်အေးစေတာပါပဲ။
အေစီစီအေ ပထမပိုင်း တက်ဖို့ကျောင်းအပ်ဖို ့ရာ စုစုပေါင်း စင်ကာပူ ၄၀၀၀ ဝန်းကျင် လောက် ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ အိုင်စီအေ က စတူးဒန့်ပါစ့် ကျပြီဆိုတဲ့ စာကို ရန်ကုန်ကို စာ နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အီးမေလ်း နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် စကန်ဆွဲပြီး ပို ့ပေး လိုက်တာနဲ့ သံရုံးကို ဗီဇာ ဝင်စရာမလိုပါဘူး။ လေယာဉ်လက်မှတ်ကို လည်း တခြမ်းထဲ ဝယ်လာရုံပါပဲ။ စင်ကာပူ လေဆိပ် ရောက်တာနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို အဲ့ဒီ အိုင်စီအေက စတူးဒန့်ပါစ့် ကျပြီဆိုတဲ့ စာ ထုတ်ပြလိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ စတူးဒန့်ပါစ့် ကို သွားထုတ်တဲ့ နေ့ကျမှ ငွေ၂၀ ပိုပေးရုံပါပဲ။ ရန်ကုန်မှာ ဗီဇာဝင်ကြေး ပေးတာနဲ့ တူတူပါပဲ။
ဒါဆိုရင် အေစီစီအေ တက်ကြမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြည့်စုံလောက်ပြီလို ့ထင်ပါတယ်။ စလုံးရောက်ရင် သုံးစွဲဖို့ငွေတွေ သယ်လာဖို့တော့ မမေ့နဲ့ဦးပေါ့။ :)
ဒီနေရာတွေမှာ အချက်အလက် တွေ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
MAS (Yangon) U Thura Shein
သတင်းအချက်အလက်များ ရှာဖွေပေးသော စာရေးသူ၏ သက်ထား
သိချင်သည်များကို ဖြေကြားပေးသာ ကက်ပလန်မှ ဝန်ထမ်းများ
အတွေ ့အကြုံအချို ့ကို ပြောပြပေးသော မိတ်ဆွေများ
at Sunday, December 21, 2008 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar 1 comments
at Friday, December 19, 2008 Labels: General , MM Posted by nyimuyar 1 comments
တကယ်တော့ အခေါ်အဝေါ်သာ စာရေးသူတို့နဲ့ စိမ်းနေပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ ရင်းနှီးပြီးသား ကိစ္စတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဖားဘစ်ရှ် ကို မြန်မာမှုပြုမယ် ဆိုရင် တဖန်ပြန်လည် မွမ်းမံထားသော (သို ့မဟုတ်) တပတ်ရစ် အသစ် လို့ဆိုနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
တကယ်ဆို တဖန်ပြန်လည် မွမ်းမံထားသော ဆိုတာလေးက ပိုပြီး ဆီလျှော်မယ် လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တပတ်ရစ် အသစ် ဆိုတာလေးက ပိုလို ့ရွတ်လို့ကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ စာရေးသူကလည်း တပတ်ရစ် အသစ် ဆိုတာလေးက ဆန်းနေမလားလို့ခေါ်ရ ခံတွင်းတွေ ့လို ့နေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် တပတ်ရစ် အသစ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို သူရို့တိုင်းပြည်တွေမှာ တွင်တွင် သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။ သူရို့တွေဆီ မှာ ပစ္စည်းအသစ် ဝယ်တဲ့အခါ အချို ့က ၇ ရက်အတွင်း အချို ့က ၁၄ ရက်အတွင်း မကြိုက်ရင် ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ မူတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး အာမခံ ပေးတဲ့ ကာလအတွင်း အသစ်တလုံး ပြန်ပေးတာတို့ပြန်ပြင်ပေးတာတို ့တွေ ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီ မူဝါဒတွေ ကနေပြီး ရယ်၊ တခါ ထုတ်လုပ်နေရင်း အရည်အသွေးစစ်ဆေးဌာနမှ အရည်အသွေး စံနှုန်းမမီ ဘူးလို ့သတ်မှတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရယ်၊ အခြား ကိစ္စ လေးတွေကြောင့် မူလအတိုင်း ပြန်မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတွေရယ် ကို ပြုပြင်မွမ်းမံစရာရှိတာ မွမး်မံ ပြင်ဆင် ဖြုတ်လဲ စရာရှိတာ ဖြုတ်လဲ အစားထိုး ရီဖားဘစ်ရှ် ရယ်လို့ဈေးကွက် ပြန်တင်ပြီး ရောင်းဝယ် ကြပါတယ်။
သုံးစွဲ သူဆီကနေ မှ ပျက်လို ့ဖြစ်ဖြစ် အခြားစံလွဲလို ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ရောက်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တော့ သီးသန့်စကားလုံးမသုံးပေမယ့်။ ထုတ်လုပ်နေစဉ်မှာ စံလွဲ စံမမှီ လို့သုံးစွဲသူဆီ လုံး၀မရောက်သေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကျတော့ Manufacturer Refurbished သို့Factory Refurbished ရယ်လို ့သီးသန့် သုံးစွဲတာ တွေ ့ရပြန်ပါသေးတယ်။
ထုတ်လုပ်သူ အများစု ကလည်း အဲ့လို့တပစ်ရစ် အသစ်တွေကို သီးသန့် ရောင်းချပြီး ပုံမှန်အနေနဲ့ အနည်းဆုံး ပေါ်က်ဈေးထက် ၃၀ ရာနှုန်းကနေ အများဆုံး ထက်ဝက်ကျော်လောက်အထိ ဈေးတွေ ချပြီး ရောင်းချပေးတာ တွေ ့နိုင်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ပန်းသီး ကုမ္ပဏီ ဆိုရင် သု ့ရဲ့ မက်ခ်ဘွတ် ခရီးဆောင် ကွန်ပျူတာတွေ အိုင်ပေါ့တွေကို ၃၀ ကနေ ၆၀ ရာနှုန်းလောက်အထိ ပန်းသီး ကုမ္ပဏီ အသိအမှတ်ပြု တပစ်ရစ် အသစ် ဆိုပြီးတောင် ရောင်းချပေးပြီး အာမခံကလည်း အသစ်စက်စက် နည်းတူ တနှစ်တောင် ပေးထားပါတယ်။
ပန်းသီး က တပစ်ရစ် အသစ်တွေကို ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဟာ တကယ့်ကို ကောင်းပါတယ်။ အသိတယောက် ပြောပြတာဆိုရင် သူ ့မိတ်ဆွေ တဦး တပတ်ရစ် အသစ် ဝယ်လိုက်တာ လက်ထဲရောက်ပြီး မကြာမီ ချွတ်ယွင်းချက် တခုဖြစ်လို ့ဆားဗစ်စင်တာ ပြန်ပို ့လိုက်တာ ဟိုဖက်က ပြင်လို ့မရလို ့ဘဲလား ဘာဖြစ်လို ့လည်း မသိ အသစ်စက်စက် တလုံး ပြန်လဲပေးလိုက်တယ် ဆိုတာလေးပါ။
စာရေးသူ ရဲ့ ဘဝမှာ အဲ့ဒီ ရီဖားဘစ်ရှ် ဆိုတာ စပြီး ရင်းနှီးတာက ဂေါ်ဒန် က ဟာဗီးနော်မန်ဆိုင် မှာပါ။ မှတ်မိပါသေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက် ဈေးခေါက်ချိုးလောက် သက်သာနေတာလည်း လို့အရောင်းစာရေးကြီး ကို မေးကြည့်တော့ ဒီမှာ ရေးထားတယ် လေ ရီဖားဘစ်ရှ်တဲ့ ။ ပထမဆုံး ကြားဖူးတာ ဆိုတော့ နားမလည်ပါဘူး ။ ဘာလဲ ရီဖားဘစ်ရှ် ဆိုတာ ငါနားမလည်ဘူး ရှင်းပြပါဆိုတော့ သူက အရှည်ကြီး ရှင်းပြတာ မှတ်မိပါသေးတယ်။
နောက်ပြီး အဲ့ဒီ အရောင်းစာရေးကြီးကပဲ အကြံတောင် ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ တတ်နိုင်ရင် အသစ်ဝယ်ပါလားတဲ့။ ရီဖားဘစ်ရှ် လောက် အရည်အသွေးမမြင့် တဲ့ ပစ္စည်း ခပ်လတ်လတ် ဆိုလည်း ပိုမကောင်းဘူးလားတဲ့ အသစ်သုံးရတာပေါ့တဲ့ ။ သူ ့အတွေးအမြင်လေးပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ ့ကျေးဇူးကြောင့် တပတ်ရစ် အသစ် ရီဖားဘစ်ရှ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးနဲ့ ကျွမ်းဝင်လာပါတော့တယ်။
အခြားထုတ်လုပ်သူ တော်တော်များများကလည်း တပတ်ရစ် အသစ်တွေ ရောင်းပေမယ်လို့ပန်းသီးလောက် အာမခံ မပေးထားပါဘူး။ ပုံမှန် ဆိုရင် ရောင်းချတဲ့ စတိုးဆိုင်တွေ အနေနဲ့ ဆိုင်ကပေးတဲ့ အာမခံ ရက် ၃၀ ဒါမှမဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ ကိုယ်တိုင်က ရောင်းတယ်ဆို ထုတ်လုပ်သူက ပေးတဲ့ ရက် ၉၀ အာမခံပဲ ပေးရိုး ထုံးစံရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် တပတ်ရစ် အသစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် မေ့လို ့မရတာ အဲ့ဒီ ကန့်သတ်ထားတဲ့ အာမခံ မှုပါပဲ။ စာရေးသူလည်း တပစ်ရစ် အသစ် ပစ္စည်း အချို ့ဝယ်သုံးဖူးပါတယ်။ ဘာမှ စိတ်ညစ်စရာ မကြုံတွေ ့လိုက်ရပါဘူး။ ကံကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမလားတော့ မသိပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း တပတ်ရစ် အသစ်တွေ ကြုံတွေ ့ဖူးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မီးချောင်းချုပ် တွေ ရောင်းတဲ့ ဒိုင်တွေ ပါပဲ။ ၂၉ လမ်း၊ လမ်း ၃၀ တဝိုက်က လျှစ်စစ်ပစ္စည်း ဒိုင်ကြီးတွေမှာ အောတို ချုပ်တွေ ပါကင်ကြီးတွေ နဲ့ ရောက်လာတဲ့အခါ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများက ပျက်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဆိုင်မှာတင် ပြင်တဲ့ သူခေါ်ထားရပြီး ကောင်းအောင်ပြင် ပြီးရောင်းရတာပါပဲ။ မဟုတ်ရင် တအားအရှုံး ပေါ်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒါကိုတော့ ဘယ်သူမှ ရီဖားဘစ်ရှ် ရယ်လို့ မခေါ်ကြပါဘူး။ အခြားနေရာလေးတွေမှာလည်း သူ ့နည်း နဲ့ သူ ရှိနေကြမှာပါ။
ဘာရယ် မဟုတ် တပတ်ရစ် အသစ် ရီဖားဘစ်ရှ် လို့ ရွတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ရွတ်ရင်း ခေါင်းထဲ ပေါ်လာသမျှ ရေးလိုက်ပါတော့တယ်။ စာဖတ်သူတွေက ရော တပတ်ရစ် အသစ် ရီဖားဘစ်ရှ် နဲ့ ဘယ်လောက်များ ရင်းနှီး ထိတွေ ့ဖူး ပါသလဲဗျာ။
at Thursday, December 18, 2008 Labels: MM , Travel Posted by nyimuyar0comments
စာရေးသူ နဲ့ အရင်းနှီးဆုံး ပြည်ပနိုင်ငံတွေက လေဆိပ်တွေထဲမှာ ဒွန်မောင်း လေဆိပ် Don Mueang / ท่าอากาศยานดอนเมือง / Don Muang က ထိပ်ဆုံးပါပဲ။ တကယ်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးလေဆိပ်။ ကမ်ဘာ့အကြီးဆုံး လေဆိပ်စာရင်းတွေထဲမှာ ၁၈ ခုမြောက်။ အာရှမှာ နံပါတ် ၂ အဖြစ်ကာလ ကြာရှည်စွာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသား တော်တော်များများလည်း ရင်းနှီးကြမှာပါ။ ဒွန်မောင်းလို့စာရေးသူတို့အားပါးတရ ခေါ်နေကြတဲ့ နာမည်ဟာ ပြောရရင်တော့ အမှားကြီးပါ။ သူရို ့ထိုင်းအသံနဲ့ ဆို စာရေးသူ ကြားသလောက် အနီးစပ်ဆုံး ဒေါန်းမွန် လို့ အသံထွက်ပါတယ်။
၁၉၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ နေ ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ဒွန်မောင်း လေယာဉ်ကွင်းလေး ဟာ ၁၉၂၄ ခုနှစ်မှာ လေကြောင်းလိုင်းတွေ စတင်ဆင်းသက်ပြီး အသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဆင်းသက်ခဲ့တဲ့ လေကြောင်းလိုင်းကတော့ ဒတ်ခ်ျ လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းများက ဆိုပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒွန်မောင်း မတိုင်ခင် ထိုင်းမှာ လေဆိပ်တခုရှိပါသေးတယ်။ ရာမ-၄ ဘုရင်လက်ထက်မှာ လေဆိပ်ကို မြေနိမ့်အရပ်မှာ ရှိလို့ ရေလွှမ်းမိုးမှု တွေ ကင်းလွှတ်အောင် ကုန်းမြင့်အရပ်လို့အမည်ရှိတဲ့ တကယ်လည်းပဲ ကုန်းမြင့်တဲ့ ဒွန်မောင်း အရပ်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါ။
လေကြောင်းလိုင်းတွေ စပြေးဆွဲ ကတည်းကဆိုရင် ၈၅ နှစ် ဒါမှမဟုတ် စတင်ဖွင့်လှစ် ကတည်းကဆိုရင် ၉၂ နှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဒွန်မောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် မနက် ၃ နာရီ ၁၂ မိနစ်မှာ ဆစ်ဒနီ ကို ထွက်ခွာတဲ့ ကွမ်တက်စ် လေကြောင်းလိုင်း ရဲ့ခရီးစဉ်အမှတ် ( QF၃၀၂) နဲ့ ခေတ်တခေတ် ကို အဆုံးသတ်စေခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇ နှစ်ဦးမှာပဲ အာရှရဲ ့မျက်နှာသစ် လို့သူရို ့တွေ ဝင့်ကြွားနေတဲ့ အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ သုဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ်ကြီး ရဲ့ပြေးလမ်းအသစ်တွေ ကွဲအက်မှုတွေကြောင့် ဒွန်မောင်းကို ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ဖို ့အကြောင်း ဖန်လာပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒွန်မောင်းကို ဒီတိုင်းထိမ်းသိမ်းထားဖို့စားရိတ်တွေကလည်း မသေးတော့ ထိုင်း လေဆိပ် အာဏာပိုင်တွေ က ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ထိုင်းနိုင်ငံ ပြည်တွင်း လေယာဉ်တွေ ဆင်းသက်ဖို့စီမံကြပါတယ်။
လေဆိပ်ကြီးပိတ်လို့၅ လအကြာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ ့မှာ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာတာ ဒီကနေ ့အထိပါပဲ။ ထိုင်းနိုင်ငံ အလံတင် လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်တဲ့ ထိုင်းအဲဝေး ၊ နော့အဲ နဲ့ ဝမ်းတူးဂိုး လေကြောင်း တို့ပြေးဆွဲ နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ လေဆိပ်ကိုယ်စားပြု နိုင်ငံတကာ အမှတ်အသားမှာ ဒွန်မောင်းကို ဘီကေကေ လို့နှစ်ပေါင်းများစွာ သတ်မှတ်ခဲ့တာ သင်္ခါရ သဘောတရားအရ ခုတော့ ဒီအမ်ကေ လို ့ပြောင်းလည်း သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။
ပြေးလမ်း ၂ ခု ရှိပြီး ပြေးလမ်းအရှည် က (၁၂၁၃၉ ပေအရှည်။ ၁၉၇ပေအကျယ်) ရှိပြီး ပြေးလမ်းအတို က (၁၁၄၆၁ ပေအရှည်။ ၁၄၇ ပေအကျယ်) ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၈ မေလမှာ အသစ်တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်က ပြေးလမ်းအရှည် (၁၁၂၀၀ ပေအရှည်။ ၂၀၀ ပေအကျယ်) နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆို သိပ်မကွာတော့ဘူးလို့ပြောရမှာပါပဲ။
ဒွန်မောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ကြားဖူးနား၀ ဟာသလေး တခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က စာရေးသူတို့မင်္ဂလာဒုံလေယာဉ် ကွင်းကလည်း အဆင့်မမြင့်သေးဘူးပေါ့။ ထိုင်းမှာ လေဆိပ်အသစ်ကြီးဖွင့်တော့မှာမို့ဒွန်မောင်းကို ပိတ်တော့မယ်လို့ကြေညာပြီးချိန် မြန်မာနိုင်ငံသားကြီး တဦးက အခုလို မချိတင်ကဲ ပြောပါသတဲ့။ မသုံးတော့မယ့်တူတူ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ လေဆိပ်ကြီး တို ့မြန်မာပြည် သယ်သွားလို ့ရရင်ကောင်းမယ်တဲ့။ ဒါသူ ့ရင်ထဲက စကားပါ။
ဟုတ်ပါတယ် မြန်မာတို့အမြင်မှာလည်း ဒွန်မောင်းဟာ အဲ့သလောက်ကို ကောင်းနေပါတယ်။ လေဆိပ်အဆောက်အဦ ထဲမှာ ဟိုးဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ်ကို ပုံမှန်လျှောက်သွားမယ် ဆို ၄၅ မိနစ်ကနေ ၁နာရီ နီးနီး ကြာပါတယ်။ သုံးထပ်အဆောက်အဦ မှာ လေယာဉ်တွေ ဆိုက်ရောက်တဲ့ တာမင်နယ် သုံးခုတောင် ရှိပါတယ်။ အခုအသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ သုဝဏ္ဏဘူမိ ကမှ ဆိုက်ရောက် တာမင်နယ် တခုပဲရှိတာပါ။
ဒွန်မောင်းမှာ လေယာဉ်ပြောင်းစီး ရမယ်ဆို အထာမသိရင် တော်တော် အဆင်မပြေပါဘူး။ မဟာမြိုင် ဆရာတော် ဦးဇောတိက တောင်မှ တခါက ဘယ်နေရာ သွားရမှန်းမသိ ဖြစ်သေးတယ်လို့ဟောကြားတာ နာဖူးပါတယ်။ တာမင်နယ် တွေက လှမ်းလျှောက်မယ်ဆို အဝေးကြီးပါပဲ အချိန်မလောက်လို့ပြေးလွှားရမယ် ဆို စိတ်မော လူမောနဲ့ တော်တော် ပင်ပန်းပါတယ်။
တခါက ဆရာသမား တဦး ရန်ကုန်မှာ လေယာဉ်နောက်ကျတော့ ဒွန်မောင်းလည်း ရောက်တာ နောက်ကျတာပေါ့။ သူပြောင်းစီးမယ့် လေယာဉ်က တိုင်စီဝေးလို့ခေါ်တဲ့ ပြေးလမ်းပေါ်တက်မယ့် တန်းစီတဲ့ လမ်းပေါ်တောင် ရောက်နေပါပြီ ဒါပေမယ့် သူ ့စီးမယ့် လေကြောင်းလိုင်း ကောင်တာ တခုမှာ နောက်ကျလို ့ပြေးနေပါတယ် စောင့်ခိုင်းပေးပါ ပြောထားတော့ လေယာဉ်ကစောင့်ပေး သူကပြေး နဲ့ တော်တော် ဟိုက်သွားတယ် ပြောပါတယ်။ သူတို့ကို ကားတစီးနဲ့ သပ်သပ် လိုက်ပို ့ပြီး ကုန်တင်တဲ့ ကရိန်းလေးနဲ့ တင်ပေးတယ် လို့ကြားဖူးပါတယ်။ ဒွန်မောင်းမှာ လေယာဉ်ပြောင်းစီးရတာ စာရေးသူတို ့လို မလည်မဝယ်တွေဖို ့တော့ စွန် ့စားခန်းပါပဲ။
ဒွန်မောင်းကို အကြိမ်ကြိမ် ရောက်ဖူးတာတောင်မှ တခါတလေ လေယာဉ်က ကွင်းထဲမှာ ရပ်လို့ကားကြီးနဲ့ လေဆိပ်အဆောက်အဦ ထဲ ဝင်ရတဲ့အခါ မျက်စိလည် လမ်းမှားဖူးပါတယ်။ တခါကဆို ဘယ်နဲ့ ညာနဲ့
မှားပြီး လျှောက်မိတာ အချိန်ကုန် လူမော စိတ်မောဖြစ်ဖူးပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒွန်မောင်းဟာ ပြည်ပထွက်တဲ့ မြန်မာပြည်သားတိုင်းမစိမ်းတဲ့ နေရာတခုဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး တကြိမ်မဟုတ်တကြိမ် ရောက်ဖူးကြမှာပါ။ စာရေးသူဆိုရင် ဒွန်မောင်း မှာ ည လည်းပဲ
အိပ်ဖူးပါတယ်။ တရက်နီးနီးလောက်လည်း နေဖူးပါတယ်။ ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားခရီး သွားတုန်းက အတူသွားတဲ့ ခရီးဖော်ကို မေးမိတယ်။ ဘန်ကောက်လေဆိပ်ကြီး သိပ်ခမ်းနားတယ်ပြောတယ် ဟုတ်သလားပေါ့။
သူက ပြောတယ် ဟိုရောက်ရင် သိလိမ့်မယ်တဲ့ သူ ့တုန်းကလည်း မင်းဟိုရောက်လို့မျက်မြင်တွေ ့တဲ့ ခံစားမှုအတိုင်းပါတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ရင်တခုန်ခုန် နဲ့ ဒွန်မောင်း ဆိုတာကြီးကို ရောက်ဖူးခဲ့တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်
ကိုယ်ထွက်လာတဲ့ လေဆိပ်နဲ့ ရောက်နေတဲ့ လေဆိပ် ပထမ အခေါက်လို လူတိုင်း အဲ့လို ပဲခံစားရမယ်လို ့ထင်ပါတယ်။ လူတွေမှ အများကြီး ကွင်းကြီးကလည်း အကြီးကြီး လေယာဉ်တွေ ဆိုတာ တန်းကိုစီလို ့။ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အင်မီဂရေးရှင်း ကောင်တာတွေဆိုတာ အများကြီးပဲ။ ရင်သပ်ရှုမောပေါ့။
ဒွန်မောင်းမှာ လေယာဉ်ပြောင်းစီးဖို့စောင့်ရတာ အကြာကြီးပါပဲ။ ဆိုတော့ ဒွန်မောင်းထဲမှာပဲ အချိန်တော်တော်ကြာ ဖြုန်းမိပါတယ်။ ချောင်ကြိုချောင်ကြားမကျန် အထပ်အစုံလည်း ရောက်ဖူးတယ်။ ဟိုးအရင်ကဆို ဒွန်မောင်းထဲမှာပဲ သောင်တင်နေတဲ့ ခရီးသည်တွေတောင် ရှိသတဲ့။ တယောက်တည်း အထုပ်လေး ပိုက်လို့တညလုံး နှိုးလိုက် ငိုက်လိုက နေဖူးတဲ့ အခေါက်တောင်ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်က ထွက်တော့ မနက် ၉ နာရီ။ ဒွန်မောင်းရောက်တော့ မနက် ၁၁ နာရီ နောက်လေယာဉ်က နောက်တနေ့ဝေလီဝေလင်း မနက် ၅ နာရီ လိုမျိုးတွေ ပေါ့။
တကယ်တော့ ဒွန်မောင်း ဟာ စာရေးသူ ဘဝမှတ်တိုင်တွေ ထဲမှာ တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။ ပထမဆုံး သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခရီးမှာ ပထမဆုံး ရောက်ဖူးတဲ့ တိုင်းတပါးက လေဆိပ်တခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဆရာတယောက် သင်တန်းပို ့ချတုန်းက နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဘယ်လောက်ပိုက်ဆံ ရှိသလဲ ဆိုတာကို သူ ့နိုင်ငံက အိမ်သာတွေလည်း တင် သတ်မှတ်လို ့ရတယ်လို ့ပြောဖူးပါတယ်။ နိုင်ငံထဲ မရောက်တောင် တို ့တွေ ထရန်ဆစ် လုပ်တဲ့အခါ လေဆိပ်တွေကို ရောက်ကြတယ် လေဆိပ်တွေက အိမ်သာတွေထဲ ဝင်လိုက်တာနဲ့ တင် ဒီနိုင်ငံ ရဲ ့အဆင့်အတန်းကို သတ်မှတ်လို ့ရတယ်။ ဥပမာ အမေရိကား ဂျပန် လေဆိပ်တွေမှာ ရေပူရေအေးရတယ်။ တို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တော့ ထိုင်းလေဆိပ်မှာ ရေအေးတဖက်ပဲ ရတော့တယ် ရေပူမရတော့ဘူး။ ဟော ရန်ကုန်လေဆိပ်လည်း ရောက်ရော အိမ်သာမှာ ရေမလာ ဘူး ဆိုတာလေး ပြောဖူးပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ အမေရိကား ဂျပန်တွေ မရောက်ဖူးတော့ မသိဘူး။ ဆရာနှယ့် ပိုရန်ကော လို့တွေးမိဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါလေးက စိတ်ထဲ စွဲနေပါသေးတယ်။
ရန်ကုန်မှာ လေဆိပ်အတွင်းဖက် ပထမဆုံး ရောက်တုန်းက အိမ်သာ ဝင်ပါသေးတယ်။ ရေလာတော့ ငါ့ဆရာလောက် မဆိုးသေးဘူး ဆိုတာ တွေးလိုက်သေးတယ်။ ဒွန်မောင်းရောက်တော့ အိမ်သာ လိုက်ရှာပြီး ဝင်တော့ ကွာတော့ ကွာတယ် လို ့ပဲ ပြောရမှာပါပဲ။ အချို ့လေဆိပ်ကြီး တွေနားမှာ ရေကန်တွေ ဘာတွေ တွေ ့ရတယ် ဒွန်မောင်းမှာတော့ မရှိပါဘူးလို ့ထင်တာပါပဲ။ နောက်တခု က ထိုင်းရဲ့ နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် ခြေထောက်နှိပ်တဲ့ နေရာလေးတွေ ရှိတယ်။ တခါမှတော့ မနှိပ်ဘူးပါဘူး။ ဒွန်မောင်းကို လေယာဉ်မဆင်းခင် လေပေါ်ဝဲနေတုန်း မြင်ကွင်း။ လေယာဉ်အတက် တက်ခါစ မှာဝဲနေတုန်း မြင်ကွင်းတွေဟာ မဆန်း ပေမယ့် စိတ်ထဲ စွဲနေတုန်းပါပဲ။
ခုဒွန်မောင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ခရီးစဉ်များသာ သုံးတော့တဲ့အတွက် လေယာဉ်ပြောင်းစီးတုန်းကလို ခဏခဏ မရောက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ၇ ကြိမ်လောက် ဖြတ်သန်းဖူး ကျင်လည်ဖူးတဲ့ ဒွန်မောင်း။ ဟိုဖက် တာမင်နယ် ဒီဖက်တာမင်နယ် မှားမိဖူးတဲ့ ဒွန်မောင်း။ ရင်ခုန်စွာ ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒွန်မောင်း။ လမ်းပျောက်သူ ကို ကူညီပေးဖူးတဲ့ ဒွန်မောင်း။ အမိမြေ ကို ပထမဆုံး ပြန်တုန်းက ရောက်ချင်ဇော နဲ့ စိတ်တိုနေခဲ့ဖူးတဲ့ ဒွန်မောင်း။ ခုတော့လည်း ဆုံဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့တဲ့ ဒွန်မောင်း။ လေဆိပ်ဟောင်းလို့ပြောင်းလည်း ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ခံနေရတဲ့ ဒွန်မောင်း။ ကျနော့ရဲ့လွမ်းနေဦးမယ့် ဒွန်မောင်း။
အထက်ပါ ခရီးသွားဆောင်းပါး ဆန်ဆန် ပို ့စ်ကို စာရေးသူ၏ ကိုယ်ပိုင် ထင်မြင်ချက်၊ ခံစားချက်၊ဖတ်ရှု မှတ်သားမိသော အချက်အလက်များဖြင့် ရေးဖွဲ့ပါသည်။
အချက်အလက်များ ကို ဒီနေရာတွေက ယူပါတယ်။
at Thursday, December 18, 2008 Labels: General , MM Posted by nyimuyar 1 comments
ဒီဘလော့ ကို စတင်ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီတလောမှာ ကျတော့ အကြောင်း တိုက်ဆိုင်တာနဲ့ပဲ ပြန်ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်မလုပ်တတ် တာတွေ သူများတွေ ဆီက ကြည့်ရင်း လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ အချို ့ဟာလေးတွေ ပြည့်စုံလာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျေးဇူးတင်စိတ်ဖြစ်ပြီး ဒီပို ့စ်ကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ဘလော့ကို တင်ပေးထားတဲ့ Blogger။
ရေးသမျှ အမာခံ ဖတ်ဖတ်ပေးပြီး စာတည်းမှူးလုပ်ပေးတဲ့ ချစ်သူ ဇနီးမယား အိမ်သူ သက်ထား လေး
ဧည့်သည် ဘယ်နှယောက်လာသွားတယ် ဆိုတာကို
နမူနာ ကြည့် ယူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘကောင်း ဘလော့ က ကိုဘကောင်း
ရာဟူးပိုက် ဖိဘန်နာ နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနေတယ် ဆိုတာကို
လေ့လာပြီး ယူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဝီရှိမီက ကိုအန်ဒီ
ဝင်းဖွန့်နဲ့ ရေးရေးပြီး ဇော်ဂျီကို အွန်လိုင်းကနေ ပြောင်းနေကျ
စာမျက်နှာ ရဲ့ပိုင်ရှင် ဘလော့ဂါ ကိုမောင်လှ
နောက်ပြီး ဘလော့ကို အချိန်ကုန်ခံပြီး လာဖတ်နေတဲ့ သူတွေ ပေါ့။
အင်တာနက် ဆိုဒ် တွေ ထဲက ဆိုလျှင်
စာမျက်နှာတွေ ကို ဧည့်သည် ဘယ်နှစ်ခါလာသလဲ မှတ်တမ်းတင်ပေးထားတဲ့ StatCounter နဲ့ FastWebCounter
တပြိုင်တည်း ဖတ်နေဦးသူရေ ဖော်ပြပေးတဲ့ 24Log
ပို ့စ်အသစ်တွေ တက်တိုင်း စုစည်းပေးထားတဲ့ FeedBurner ။
ကိုယ်ဘလော့ အခြေအနေ ကို ဆန်းစစ်နိုင်တဲ့ Google Analytics။
အလျှင်းသင့်သလို ဆက်လက် ပြီး တိုးချဲ့ ရေးသွားပါ့မယ်။
at Tuesday, December 16, 2008 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar2comments
အိမ်ပြောင်းရတာလည်း တော်တော် ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တခုပါ။ ပစ်စည်းတွေ သိပ်မရှိလို ့က ခံသာပေမယ့် များလို ့ကတော့ သိမ်းဆည်း ထုပ်ပိုးရတာတင် တော်တော့ကို အလုပ်များပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ ဘယ်လိုနည်း နဲ့ ပြောင်းမလဲပေါ့။ တကယ်က စင်ကာပူလို နိုင်ငံမျိုးမှာ အိမ်ပြောင်းရတာ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ် အိမ်ပြောင်းပေးတဲ့ မူဗာ (Movers) တွေ ခေါ်လိုက်ရုံပါပဲ။ မူဗာမှာ ၂ မျိုးကွဲသွားပါတယ်။ ပုံမှန် အိမ်ပြောင်းတဲ့ သူကို မူဗာ (Mover) လို ့ပဲ ခေါ်ကြပြီး သေချာကောင်းကောင်း ဈေးကြီးကြီးနဲ့ ပြောင်းပေးတဲ့ အဖွဲ့တွေကို ကျတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မူဗာ (Professional Movers) လို ့ခေါ်ကြပါတယ်။
ပုံမှန် မူဗာ တွေကတော့ သယ်ပေးမယ့် လူ မခေါ်ဘဲကိုယ်တိုင် သယ်မယ်ဆို ကားခချည်းဘဲ
စလုံး တကျွန်းလုံး ဘယ်နေရာ ပြောင်းပြောင်း နီးနီး ဝေးဝေး ၄၀ ကနေ ၈၀ လောက်အထိ ရှိပါတယ် ။ ဒိုင်နာ ၁၀ ပေ ကားလေးတွေပါ။ ဈေးပေါတဲ့ ကားတွေက အမိုးဖွင့်လေးတွေ များပြီး ကွန်တိန်နာခန်းလို ပါရင် ဈေးကြီးသွားပါတယ်။ မန်းပါဝါ (Men Power) လို့သူတို ့ခေါ်တဲ့ ကူသယ်ပေးတဲ့ လူ တယောက်ကို တနာရီ ၁၅ ဒေါ်လာ လောက်ပေးရပါတယ်။ ပုံမှန် အားဖြင့် ကူသယ်ခ က ၃၀ ကနေ ၁၀၀ လောက်အထိ ပုတ်ပြတ် ကျတတ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ တခေါက်ကို ကူသယ်ပေးတဲ့ လူတွေ ခေါ်ရင် အပြီးအစီး ၇၀ ကနေ ၁၅၀ လောက်အထိ ကျပါတယ်။ ကိုယ်က သိပ်သန်မာပြီး လူအုပ်တောင့်ရင်တော့ ကားချည်းပဲငှား အနည်းဆုံး ၄၀ ကနေ အများဆုံး ၈၀ ပေါ့။
အဲ့လို ဈေးသက်သက်သာသာ နဲ့ပြောင်းပေးတဲ့ စာရေးသူတို ့လက်စွဲ မူဗာကတော့
အန်ဒီ လို ့ခေါ်တဲ့ တရုတ်ကြီးပါ အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းကောင်းမရပါဘူး ဒါပေမယ့် သဘောကောင်းပါတယ်
Andy အန်ဒီ - ဖုံး - ၉၀၆၀၆၁၂၆
(ပိတ်ရက်များ ဆို ဘွတ်ကင်တွေ ပြည့်နေလို့တပါတ် ၁၀ ရက်လောက် ကြိုမှာထားရပါတယ်)
နောက်တယောက်က အက်မန် ပါ (မလေးလူမျိုးပါ) အန်ဒီ ဆရာသမားလို ့ပြောကြတယ် သူလည်း ကောင်းပါတယ်
Edmund အက်မန် ဖုံး - ၈၁၄၄၈၂၆၆ ပါ။
သူတို ့နဲ့ပြောင်းတိုင်း စိတ်ချမ်းသာရလွန်းလို့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင် ၁၀ ခါထက်မနည်း အိမ်ပြောင်း ဖူးပါတယ်။
ဒီနောက်ဆုံးတခေါက် ကြားရက်ကြီး ပြောင်းရမှာရယ် ပစ်စည်းများတာရယ်ကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မူဗာခေါ်လိုက်တယ်။ သူတို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မူဗာက တဘာသာ ကိုး။
မပြောင်းခင် အနည်းဆုံး ၂ ပါတ်ကြိုပြီး စီစဉ်ရပါတယ်။ ကပ်မှဆိုရင် ဈေးတွေ ပိုကြီးပါတယ်။ ဖုံးဆက်လိုက်တာနဲ့ သူတို ့ရုံးက တယောက် လာကြည့်တယ်။ ပရိဘောဂ ဘယ်လောက်များမလဲ ဘယ်လောက်ခက်ခဲမလဲ ဘယ်လောက်အလုပ်ရှုပ်မလဲ ဘယ်လောက် ပင်ပန်းကြမလဲပေါ့။ ပြီးတော့ ဈေးပြောပါတယ်။ ၂+၁ တိုက်ခန်း ပရိဘောဂအစုံအလင်ကို ၃၀၀ ကနေ ၄၅၀ တွင်းရှိပါတယ်။ ဈေးညှိလို ့ရပါတယ်။စာရေးသူတို့ဈေးညှိကြတော့ နောက်ဆုံး ၃၅၀ နဲ့ ဈေးတည့်သွားပါတယ်။ ဘွတ်ကင် ဖြတ်ရင် လျှော်ကြေး ၁၀၀ လာမသိဘူး ပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး ဘောက်ချာထဲမှာ ရေးထားသေးတယ်။ ပိုင်ပါ့ကွယ်။
အဲ့ဒီ ဈေးလာဖြတ်တဲ့ သူက အိမ်က ပစ်စည်းအနေအထားကို ကြည့်ပြီး သူ ့သဘာ နဲ့ သူ တွက်ချက်ပြီး စက်ကူ ကဒ်ထူပုံးတွေ ရေးသွားပါတယ်။ မပြောင်းခင် ၂ ပါတ်အလိုမှာ အိမ်ကို ကဒ်ထူပုံး တွေ လာချပါတယ်။ တိတ်တွေနဲ့ စတစ်ကာလေးတွေ နဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဈေးက ပေးထားရတာကိုး သေချာလုပ်တာပေါ့။ မပြောင်းခင်အထိ စိတ်ကြိုက် ထည့်စမ်းပဲ။ မလောက်ရင် ဖုံးထပ်ဆက်လိုက် အပိုကြေးနဲ့ ပုံးအပိုတွေ လာပေးလိမ့်မယ်။ ပရိဘောဂ တွေ ကို ဘာမှ မလုပ်နဲ့ သူတို ့ဖြုတ်ပေးမယ်တဲ့။
ပြောင်းမယ့်နေ့ပြောထားတဲ့အချိန် ဆို ကားကြီးနဲ့ လူ ၆ ယောက်လောက်ပါလာတယ်ပေါ့ဗျာ။ မထိခိုက်အောင် သူတို ့ဖာသာ သူရို့ပလစ်စတစ်တွေ နဲ့ပတ် အဝတ်တွေ နဲ့ ခံပေါ့။ ဘီရိုတွေ ပရိဘောဂတွေ ဖြုတ်တဲ့သူက ဖြုတ်။ သယ်တဲ့ သူတွေက သယ်ပေါ့။ တအိမ်လုံးကို သယ်ပြီး ကားပေါ်တင်သွားတာ မိနစ် ၂၀ သာသာပဲ။
အိမ်အသစ်ရောက်တာနဲ့ အဲ့လို ပဲ သယ်ပေါ့။ပရိဘောဂတွေ ဆင်ကြပေါ့။ ပုံးတွေကတော့ ထားခဲ့တယ်။ နောက် ၂ ပါတ်လောက်မှ လာယူတယ်ပေါ့ဗျာ။ လာမယူခင် ဖုံးဆက်သေးတယ် ဘယ်နေ ့လာယူပါ့မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။
စာရေးသူတို ့ပြောင်းလိုက်တဲ့ မူဗာက အီလစ် Elite Movers တဲ့ စလုံးတွေ တော်တော်များများလည်း ကြိုက်ကြတယ်ပြောတယ်။ တော်တော်လည်းပဲ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ ပေးထားရတာလည်း နင့် နေတာကိုး။
ဘာတခုမှ ဝိုင်းမသယ်လိုက်ရတာမို့လည်း ကျေနပ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဝတ်လျှော်စက်တွေ ရေခဲသေတ္တာ တွေလည်း နေရာချပြီး ဆင်ပေးပါသေးတယ်။
ဒီပို ့ကတော့ အိမ်ပြောင်းဖို ့ပြင်ဆင်နေပြီး ဘယ်မူဗာ နဲ့ ပြောင်းရမှန်းမသိ သူတွေ အသုံးဝင်ဖို့ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
at Tuesday, December 16, 2008 Labels: JTC , MM , Singapore Posted by nyimuyar 1 comments
at Monday, December 15, 2008 Labels: JTC , MM , Singapore Posted by nyimuyar0comments
ပီအက်စ်ပီ ဖန်းဝဲလ်ကို အဆင့်မြင့်တင်ခြင်း PSP CFW upgrade
at Friday, November 14, 2008 Labels: Firmware , MM , PSP Posted by nyimuyar0comments
ဒီလပိုင်းမှာ ရှိရှိသမျှ ကွန်ဇိုး နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို ဖန်းဝဲလ် အသစ် တင်ဖြစ်တယ်။ စာရေးသူက ကျွမ်းကျင်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတွေ ရဲ့ ဗီဇအရ ရှိတဲ့ ပစ်စည်းလေးတွေကို ဟိုကလိ ဒီကလိချင်တဲ့ စိတ်တော့ ရှိတာပေါ့။
ဒါနဲ့ပဲ ပထမဆုံး စာရေးသူ အမျိုးသမီးရဲ့ပီအက်စ်ပီ (စလင်း) ကို ပထမဆုံး ဖန်းဝဲလ် အဆင့်မြင့်ဖြစ်တယ် ။ မူလက အမ်-၃၃ ၃.၉၅ ဖန်းဝဲလ်ကနေ အမ်၃၃ရဲ့ ၄.၀၁ ဖန်းဝဲလ်ကို အဆင်မြင့်လိုက်တယ်။ အဆင့်မြင့်နေတုန်းကတော့ ပထမဆုံး ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ပေါ့။ ဘာများဖြစ်သွားမလဲ ဘာများဖြစ်သွားမလဲ။ အမျိုးသမီးကလည်း သူ ့ဂိမ်းစက်လေး ပျက်သွားမယ်ပေါ့။ ၄.၀၁ အောင်မြင်စွာ အဆင့်မြင့်ပြီးသွားမှပဲ ဟင်းချ နိုင်တော့တယ်။ အဲ့ဒီကနေ အားတက်သွားလိုက်တာ လွန်ခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ တတိယပါတ်မှာ အမ်၃၃ အဖွဲ့ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် ဖန်းဝဲလ်ဖြစ်တဲ့ စီအက်ဖ်ဒဗလျူ ၅.၀ အမ်၃၃-၃ ကို ထပ်မံပြီး အဆင့်မြင့်ဖြစ်ပြန်တယ်။ ဒီတခါတော့ ပထမအခေါက်က အတွေ ့အကြုံရှိပြီးသားဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲ ပြီးဆုံးသွားတယ်။
စီအက်ဖ်ဒဗလျူ လို့ခေါ်တဲ့ ကပ်စတန်ဖန်းဝဲလ်(ပြုပြင်ထားတဲ့ ဖန်းဝဲလ်) ကို ဒါ့အဲ့လက်စ် လို ့အမည်ရတဲ့ ပရိုဂရမ်မာ တဦးက ဒိုင်ခံရေးသားတယ်လို ့လည်း အင်တာနက်သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြကြပါတယ်။ မူလဆိုနီရဲ ့ဖန်းဝဲလ်ကို (အိုအက်ဖ်ဒဗလျူ-အော်ရဂျင်နယ် ဖန်းဝဲလ်) လို ့ခေါ်ကြပြီး ယူအမ်ဒီ ဒစ်ပြားနဲ့ ဂိမ်းတွေပဲ ဆော့လို ့ရတာပါ။
ဟုမ်းဘရူး လိုခေါ်တဲ့ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရေးသားထားတဲ့ ဖန်းဝဲလ်တွေကတော့ ဒေါင်းလုပ် ရယူထားတဲ့ ဂိမ်းတွေကို ဆော့လို ့ရတဲ့အပြင် အခြား မူလဆိုနီ ဖန်းဝဲလ်မှာပါ မရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါရနိုင်ပါတယ်။
အခု ဒုတိယနောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့ စီအက်ဖ်ဒဗလျူ ၅.၀ အမ်၃၃-၃ မှာဆိုရင် ပီအက်စ်ပီကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ အလိုအလျှောက် သိနိုင်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး အလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်တဲ့ တိုင်မာကို လည်း နေရာအနှံမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာရေးသူကတော့ ၅.၀ အမ်၃၃-၃ ကို ပိုလို ့နှစ်သက်သဘောကျမိပါကြောင်း၊
(နိုဝင်ဘာ ၁၄၊၂၀၀၈ ခု) ညီမူရာ
at Tuesday, November 04, 2008 Labels: EN , PSP Posted by nyimuyar0comments
From D.A with Love :D
DarkAlex (D.A) our Guru, makes his nice release of Custom FirmWare for homebrew community. This is called PSP CFW 5.0 M33-3. I installed CFW 5.0 M33-3 to my PSP slim and that working smooth and perfect.
Original Msg from our beloved DarkAlex:
- PSN version check is now automatically bypassed without need of touching any setting.
Journey 4.01 to 5.00
5.00 ofw: http://rapidshare.com/files/154173870/500.PBP
Further Info from DarkAlex's Site: 5.00 M33 Release , 5.00 M33-3 release
1. Download the above Mirror1 or Mirror2 link and extract the archive.
2.Copy the UPDATE folder contained in the archive to X:/PSP/GAME
3. Download the 5.00 OFW, and then place it in X:/PSP/GAME/UPDATE
4. Navigate to the Game menu on the PSP and execute the program, it will not run unless there is 78 percent battery free.
5. Press X and the update process will start. Yes it may look similar toaregular Sony update but don't worry!
6. Once finished, the updater will ask you to press X or O to reboot. You MUST do this, otherwise you'll end up withabrick.
7. You've successfully installed 5.0 M33 3!
CFW : Custom FirmWare
OFS : Original FirmWare (originally from Sony)
at Thursday, August 28, 2008 Labels: Apple , EN , General Posted by nyimuyar0comments
at Saturday, August 23, 2008 Labels: EN , PSP Posted by nyimuyar0comments
According to PSPFanBoy
I'm afraid as our current PSP-2000 will become PSP-Dim, when after new PSP-3000 will be launch.
Come on, go and read from PSPFanBoy
Another report By Charlie Sorrel : at wired.com August 21, 2008 | 7:42:10 AM
Sony Announces PSP 3000 Announced by Sony
Sony has announced the semi-successor to the Playstation Portable, the PSP 3000, which will go on sale worldwide Oct. 15. The International Herald Tribune is reporting that it will cost €200 (or about $294 in U.S. money), while the current PSP (€169, or $250) will remain on sale.
So what's new? Not much. The screen has been improved, and features an anti-reflective coating, higher contrast andawider color gamut. This should translate into sharper, brighter and more colorful images. There is alsoabuilt-in microphone to make Skype calls easier, andatweak to the video-out socket, "which will allow new PSP users to enjoy games on non-progressive TVs."
Perhaps most significant of all are the two new colors Sony has invented for the new handheld, two colors that are likely to be the only visual differences noticed by the casual viewer between the 3000 and the current Slim'n'light model. In addition to boring old "Piano Black," the PSP 3000 can be had in either "Pearl White" or "Mystic Silver," in order, as the press release says, "to meet variety of lifestyle and preference of all ages."
The €200 buys you the console andagame (or the Go! Communications software). Alternatively, you could spend the same €200 on, say, an iPhone, and getaslew of extra features. Just saying.
Read on for the full specs from the press release.
PSP(R)(PlayStation(R)Portable) (PSP-3000) Product Overview
Supported profile       PSP(R) (PlayStation(R) Portable) Game
PSP(R)(PlayStation(R)Portable) (PSP-3000) Color Variations
For comparison, here are the specs for the current PSP.
at Sunday, August 17, 2008 Labels: MM , Technical Posted by nyimuyar0comments
ဘတ်ခ်ျဖိုင် သို ့ကွန်မန်းလိုင်း ဖြင့် ဖိုင်ကလေးများစွာကို ရှာဖွေပြီး နေရာသစ်တွင် သိမ်းယူပုံ
စာရေးသူ ရဲ့စက်ထဲက ဖိုဒါ တခုထဲမှာ နောက်ထပ် ဆပ်ဖိုဒါ လေးတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဆပ်ဖိုဒါ လေးတွေ ထဲမှာ မတူညီတဲ့ ဖိုင် အမျိုးအစား လေးတွေ ပွစိတက်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဖိုင်တွေ ထဲကမှ ဆိုကြပါစို့.pdf ဖိုင်တွေ ပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒီ .pdf ဖိုင်တွေ ချည်းပဲ ရွေးပြီး ရှာလည်း ရှာ အခြားတနေရာကိုလည်း ကူချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ ကို စာရေးသူက ကွန်မန်းလိုင်း ဒါမှမဟုတ် ဘက်ခ်ျဖိုင်တခုကနေ လုပ်ချင်ပါတယ်။ ကွန့်တာပေါ့ဗျာ။
ဒါနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်လိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ရှာတဲ့အခါ သွားတွေ့ပြီးအဆင်ပြေသွားပါတယ်။
မူလ ဖိုဒါ နှင့် ဖိုင်များတည်ရှိပုံ
folder structure are as below
နေရာသစ်တွင်eare as below
C:\_NewFolder\_ဆိုပြီး ရှိထားရာ ထိုအောက်တွင် Pdfplace ဟူပြီး အသစ် ဖိုဒါ ဆောက်ကာ အလိုအလျှောက် ကူးယူသွားစေချင်ခြင်းဖြစ်သည်
ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို ကွန်မန်းလိုင်း မှ တကြောင်းတည်း လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သလို ဘက်ခ်ျဖိုင်ရေးပြီးလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း တွေ ့ရသည်။
ကွန်မန်လိုင်းတွင် တကြောင်းတည်း ရေးပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်
cmd /c For /F "tokens=* delims=" %* in ('Dir /b /s "C:\_OriginalFolder\_*.pdf" 2^>nul') Do @ %WinDir%\_system32\_xcopy.exe /O /D /Y "%*" "C:\_NewFolder\_Pdfplace"
REM save this file as move.pdf
:: begin the file
:: Find and Copy Files from batch file
:: by nyimuyar.blogspot.com
:: 18 July 2008
Set "sourcefiles=C:\_OriginalFolder\_*.pdf" (search also in subdirectories)
For /F "tokens=* delims=" %%* in (
'Dir /b /s "%sourcefiles%" 2^>nul'
) Do echo.%%~nx* &(
%WinDir%\_system32\_xcopy.exe /O /D /Q /Y "%%*" "%destinationfolder%\_" >nul
:: end the file
မူလ ဆွေးနွေးချက် ကိုဖတ်လိုလျှင် : source from here
and also read more as here